Xa ii-Psychopaths ziye eMsebenzini | Martech Zone
Xa iiPsychopaths ziye eMsebenzini
NgeCawa, Agasti 6, 2006 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 23, 2021 Douglas Karr
Uninzi lwabahlobo bam abasenyongweni kunye nabalingane bayazi ukuba ndinamava amabi kakhulu ndishiya umqeshi wam kwilixa elidlulileyo. Abanye abantu banokuzibuza ukuba kutheni abantu bengakwazi ukuqhubeka nje emva kwento enjalo. Xa umqeshi engumbutho omkhulu kakhulu uhlala ebuya ephindaphinda kwaye akukhumbuze. Ngaphandle kokuba uphume esixekweni, uyaqhubeka nokuva 'ilizwi esitratweni' kwinto eyenzekileyo emva kokuba umkile. Ukushiya umzi mveliso ayisiyiyo inketho- yile ndiyenzayo ukuze ndiziphilise.
Xa uluhlobo lomntu ongawuhlukanisiyo umsebenzi ekhaya kwaye ugalela yonke into onayo emsebenzini wakho - imeko enje kunzima ukuyishiya ngasemva. Okwethu osishiyileyo, sonke siyavumelana ngento eyenzekileyo. Kodwa abanye abantu abashiye banamanxeba anzulu kangangokuba abakwazi nokuthwala ukuya kwisidlo sasemini kwaye bathethe nathi sonke. Khawufane ucinge indlela ekumele ukuba imeko ebuhlungu ngayo yenzakalise umntu onje.
Ndingumntu owonwabileyo. Ndiyawuthanda umsebenzi wam kwaye ndiyayithanda into endiyenzayo. Kodwa xa ndikhunjuzwa ngeloxesha lomsebenzi wam, andikwazi ukuzibamba ndizibuze ukuba kutheni umntu onoxanduva eselapho kwaye esenza umonakalo. Amakhulu abantu abakhulu bahambile, isebe eliphumelele amabhaso angaphambili lisengxakini ngoku, kwaye ukusebenza kwenkampani kuyehla ngenxa yayo. Ukanti… umntu onoxanduva uya kuhlala. Oku kuyimfihlakalo kum.
Ndithathe incwadi eBorder izolo: Iinyoka kwiiSuti, Xa iiPsychopaths ziye eMsebenzini. Ndifunde intshayelelo ngelixa ndilinde ezinye izihlobo ndaye ndagqiba kwelokuba ndithenge incwadi. Kwakungenxa yokufuna ukwazi ngaphezulu kokuzama ukucacisa ukuba kwenzeke ntoni kum. Ngokwenyani andizami kudibanisa ezimbini kunye ezimbini. Kodwa ke ndiyifundile le:
“Asinguye wonke umntu owayemthanda uHelen, ewe, kwaye abanye babasebenzi bakhe babengamthembi. Wabaphatha ngendelelo oogxa bakhe abancinci kunye nenqanaba lokudelela, ehlala ehlekisa ngobuchule babo kunye nobuchule babo. Kwabo ababafumana beluncedo kwikhondo lomsebenzi wakhe, nangona kunjalo, wayenobabalo, ebandakanyeka, kwaye emnandi. Wayenetalente yokubonisa icala lakhe elilungileyo kwabo waziva ebalulekile, ngalo lonke eli thuba bephika, behlisa isaphulelo, belahla, kwaye begxotha nabani na ongavumelani nezigqibo zakhe.
UHelen wakhulisa udumo ngokuxelela abasebenzi abadibeneyo ukuba bafuna ukuva ntoni, iintlanganiso zokulawula inqanaba kunye neqela elilawulayo ngokungathi ziyimveliso zaseHollywood. Wanyanzelisa ukuba iingxelo zakhe ngqo zilandele izikripthi ekuvunyelwene ngazo, ehambisa nayiphi na imibuzo engalindelekanga okanye enzima kuye. Ngokwontanga yakhe, uHelen wayeyincutshe ekulawuleni iingcinga, kwaye wayephatha umphathi wakhe ngempumelelo, esoyikisa iingxelo ngokuthe ngqo, kwaye wadlala nabantu ababalulekileyo kuye. ”
Ezi ziqendu zibini ziye zathumela ingqele kumqolo wam. Andiqinisekanga ukuba le ncwadi izakundinceda ukuba ndixolele kwaye ndilibale ngento eyenzeke kum nakwabanye abantu abalungileyo, kodwa mhlawumbi izakundinceda ukuba ndiyiqonde ngcono. Andiva nezinkokeli kumbutho nakwinkampani eyayisakuba ngoogxa bam abahlonelwayo- ngokuchaseneyo, andivumelekanga kwaphela ukuba ndinxibelelane nabo.
Mhlawumbi banokuyithatha le ncwadi, bayifunde, kwaye badibanise ezimbini kunye ezimbini. Ngaphandle kwamathandabuzo, baya kuza kwinto efanayo nale ndiza kuyo ngoku.
Basenokuba basebenza nge-psycopath.
Myalelo weenyoka kwiiSuti kwiAmazon
tags: Yengqondoiingqondoiinyoka ezinxibe iisuti
Nov 21, 2008 kwi-2: 45 AM
Iposi enomdla, ndiyabulela andikaze ndibenayo into embi eyenzekileyo kum okwangoku!
Ngaba wakha wafunda malunga nembono "yemvisiswano yokufakelwa" ..
Kwezinye iinkampani iingxaki akujongwana nazo siyavana kuba kunyanzelekile, ukufumana isiseko. Ke kwizimo zentlalo awunakuthetha nomntu othile kodwa emsebenzini unyanzelekile. Ukucinga nje ngaphandle kodwa ukunyanzela oku ixesha elide kunokubangela isifo sengqondo.
Nov 23, 2008 kwi-11: 28 AM
Njengelinye ixhoba lokuhamba kakubi, ndivelana kakhulu nemeko kaDoug, kwaye ndiyayiqonda ukuba kuthatha ixesha elingakanani ukuphilisa. Nam, okwangoku, ndihletywa okwenzekileyo okokoko ndemkayo, kwaye nangona iinkumbulo ziphelile, andisokuze ndiwuphelise ngokupheleleyo umonakalo owenziwe kum (kwabo bangakhange babubone, unethamsanqa- ukuba ulixhoba sebenza imingxunya, nokuba ungasebenza nabo abangathembekanga okanye abo bakwindawo ephezulu, uziva ngathi udlwengulwe, uphangiwe, wabethwa, kwaye washiywa ufile). Enye yeendlela zoncedo kukuthetha "ukulahleka kwabo" kwaye "ndiyabasizela." Ndikwacinga ukuba “oosomaqhuzu abenze ubomi bam ukuba bunganyamezeleki kuyo yonke loo minyaka kufuneka ngenene babe nemicimbi ethile yokuzithemba ukuze basebenze nzima ekwenzeni ubomi bomntu onegalelo elihle esihogweni.” Zonke ezo ngcinga zindincedile ukuba ndiphilise… mhlawumbi zingakunceda nawe, uDoug.